Siduu agaasime u isticmaalo shaqaalihiisa inuu warqad u qoro, sidaas oo kale ayuu Ilaahay addoommadiisa aamminka ah u isticmaalay siday u qoraan Kitaabka Quduuska ah
Tan iyo markii la abuuray binuʼaadanka, Ilaahay wuxuu dadka kula xiri jiray malaaʼigo iyo nebiyo. Wuxuuna doortay inuu farriintiisa iyo barakada uu ballanqaaday qoraal ku dhigo. Ballamadan xagga Ilaah ka yimid waxay khuseeyaan mustaqbalkaaga. Maanta xaggee baad ka heli kartaa ballamada Ilaahay?
Ilaahay farriinta uu inoo hayo waxay ku jirtaa Qorniinka Quduuska ah. (2 Timoteyos 3:16) Wuxuu adeegsaday nebiyadiisii siday farriintaas u qoraan. (2 Butros 1:21) Fekradihiisa ayuu maankooda u gudbiyay, iyaguna way qoreen. Tusaale ahaan, waa sidii agaasime adeegsaday shaqaalihiisa inuu warqad u qoro. Waa la garan karaa inay farriinta ka timid agaasimaha oo aynan ka iman shaqaalaha. Sidoo kale, Ilaahay inkastuu dad adeegsaday siday u qoraan farriintiisa, isagaa ah qoraha runta ah oo Qorniinka Quduuska ah.
ERAYGA ILAAHAY MEEL WALBA AYAA LAGA HELI KARAA
Farriinta Ilaahay aad bay muhim u tahay oo wuxuu doonayaa dadka dhammaantood inay akhriyaan oo ay fahmaan. Maanta ‘injiilkiisa daaʼimiska ah’ wuxuu u diyaarsan yahay “quruun kasta iyo qabiil kasta iyo af kasta.” (Muujintii 14:6) Qoraallada Quduuska ah, gebi ahaan ama qayb ahaan, waxaa lagu heli karaa in ka badan 3,000 oo luqaddood. Dunida kama jiro buug sidaas oo kale loo turjumay.
Wadaag Wadaag Sidee Buu Abuuraha Inoogu Sheegaa Ballamadiisa Cajiibka Ah?
wp20 Lambar 3 bog 6
Ayuu ka Yimid Kitaabka Quduuska ah?